ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်း ထုတ်ပယ်ခံရခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအရှုပ်တော်ပုံတွေ ရှိနေလဲ - ရန်ကုန် ခေတ်သစ် မီဒီယာ
By Yangon Khitthit Media January 17, 2019 85
This Article is Sponsored by “Yangon Petrol | The Energy of Yangon.
စီးပွားရေးနဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ် ၊ ယာယီအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရန်နိုင်ထွန်းဟာ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတအမိန့်နဲ့ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ရာထူးတာဝန်က ဖယ်ရှားတဲ့အခါ အနားပေးသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အသုံးများလေ့ရှိပေမယ့်လည်း ဦးရန်နိုင်ထွန်းကို ဖယ်ရှားရာမှာတော့ ရာထူးတာဝန်က ထုတ်ပယ်သည်ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို အသုံးပြုသွားတာမို့ ဒီအချက်ဟာ ထူးခြားမှုဖြစ်နေပါတယ်။
စစ်တပ်က အရာရှိဘဝကနေ စီးပွားရေးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနကို အရပ်ဘက်အရာရှိအဖြစ် ကူးပြောင်းလာတဲ့ ဦးရန်နိုင်ထွန်းဟာ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှာ ဆယ်စုနှစ် ၁ ခုကျော်ကြာအောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှာ ညွှန်ချုပ်၊ ယာယီ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် စတဲ့ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့တာမို့ ကုန်သည်အသိုင်းအဝိုင်း၊ ဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူသိများကြပါတယ်။ သူ့ကို ထုတ်ပယ်မှုအပေါ် ဝန်ကြီးဌာနအသိုက်အဝန်း နဲ့ ကုန်သည် အသိုင်းအဝိုင်းက အံ့အားသင့်ကြပါတယ်။
ဦးရန်နိုင်ထွန်းကို ထုတ်ပယ်မှုမှာ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုင်ကြားတာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘူးလို့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဘက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာမို့ သူဟာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနဲ့တော့ မပတ်သက်ဘူးလို့ အကြမ်းဖျဉ်း ယူဆနိုင်စရာရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေက ဦးရန်နိုင်ထွန်းကို ထုတ်ပယ်စေခဲ့တာပါလဲ။ သူ့ကို ထုတ်ကွယ်မှု နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်တွေရှိနေပါသလဲ။
စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနဟာ အဓိက အရေးပါတဲ့ ဌာနဖြစ်ပြီး ကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်ပါမစ်တွေ၊ လိုင်စင်တွေ ချထားပေးရတဲ့ ဌာနလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ကုန်စည်တွေကစလို့ အရေးကြီးကုန်စည်တွေအထိ အထုတ်အသွင်း ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်တွေ၊ ပါမစ်တွေ ထုတ်ပေးရတာမို့ လုပ်ငန်းအားဖြင့်လည်း များပြားလှတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရတဲ့ ဌာနတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်း ထုတ်ပယ်ခံရမှုမှာ အဓိကအားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနက လုပ်ဆောင်တဲ့ ပို့ကုန်သွင်းကုန်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ်တွေနဲ့ ချထားပေးမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီး အဲဒီလို ချထားပေးမှုတွေကို ပြန်လည်စိစစ်တဲ့အခါမှာ အားနည်းချက်တွေ ၊ ချို့ယွင်းမှုတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလွဲအမှားတွေ ရှိခဲ့တာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့် ထုတ်ပယ်ခဲ့ရတာလို့ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က သတင်းမီဒီယာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
This Article is Sponsor by Yangon Petrol | The Energy Of Yangon.
သကြား Re-export ပါမစ်များ ချထားပေးခြင်း
ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ကုန်စည်တွေကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းပြီး ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ အခြားပြည်ပ နိုင်ငံတွေကို ပြန်လည် တင်ပို့နိုင်တဲ့ (Re-export) ကုန်စည်တွေမှာ သကြားကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာက ထည့်သွင်းပြီး Re-export စတင်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကြီးမားပြီး စားသုံးမှု များပြားတဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်ကို သကြားတွေ တင်ပို့နိုင်ဖို့ ဘရားဇီး၊ ကာတာ၊ ယူအေအီး၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေက သကြားတွေကို ရေကြောင်းလမ်းကနေ ပြည်တွင်းကို တင်သွင်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံကို ပြန်လည် တင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပက သကြားကို ပြည်တွင်းကို တင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်းကနေ တရုတ်ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး Re-export အတွက် ပါမစ်တွေကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ထုတ်ပေးပါတယ်။
သကြားကို Re-Export စနစ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှုမှာ နှစ်စဉ် တန်ချိန် ၂ သန်းခန့် ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အဲဒီတင်ပို့မှု ကို တရားဝင် တင်ပို့မှု အဖြစ် လက်မခံပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက စားသုံးကုန်အပါအဝင် ပို့ကုန်တွေ တင်ပို့တဲ့အခါမှာ တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံက အသိအမှတ်မပြုဘဲ မလိုရင် မလိုသလို ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်တာကြောင့် သကြား Re-export ဟာလည်း စကတည်းမှာပဲ မှားယွင်းတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစနစ် တစ်ခု ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။
ပြည်ပနိုင်ငံကို သကြားတွေကို ကိုယ့်ပြည်တွင်းတင်သွင်းဖို့ ဒေါ်လာ၊ ယူရို အပါအဝင် နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အမြား သုံးကြရပြီး တရုတ်ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ချိန်မှာတော့ တရုတ်သုံးငွေ ယွမ်ကိုသာ ပြန်လည်ရရှိတာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခွင့်ပြုမှု အပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်တွင်းသကြားဈေး အတက်အကျဖြစ်တာ၊ ကြံစိုက်တောင်သူတွေနဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ ကို ထိခိုက်မှု အတွက် ချိန်ဆရတာတွေကြောင့် Re-export ပါမစ်ထုတ်ပေးမှုဟာ ပိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။
သကြား Re-export ပါမစ်ဈေးကွက် ဖြစ်ထွန်းခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သကြားစားသုံးတဲ့ဈေးကွက်က ကြီးမားတာမို့ သကြား Re-export လုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးပေမယ့်လည်း ကုန်သည်နဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်တော့ ငွေရှာပေါက် ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ဈေးကွက်ရဲ့ ဝယ်လိုအားကြောင့် Re-export သကြား လုပ်ငန်းဟာ ကြီးမားခဲ့ပြီး သကြားတင်သွင်း ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်တဲ့ ပါမစ်ဈေးကွက်လည်းဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။
သကြား Re-export လုပ်ငန်းအတွက် ကုမ္ဗဏီထောင် ပါမစ်လေ ျှာက် လုပ်ကိုင်ကြတာများပြီး အဲဒီအထဲမှာမှ စည်းကမ်းချက် မလိုက်နာတဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေကို စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ပိတ်သိမ်း တာတွေ ပြုလုပ်အရေးယူရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
သကြား Re-export ပါမစ် လျှောက်ထားမှုအတွက် စည်းကမ်းချက်တွေသတ်မှတ်ချက်တွေကို စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ဘက်က ပြန်လည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်တာတွေ မကြာခဏ လုပ်ရပါတယ်။ ပါမစ် လိမ်လည် လေ ျှာက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ များစွာ ရှိခဲ့တာမို့ သကြား Re-export လုပ်ငန်းဟာ စတင်ချိန်ကတည်းက လာခြင်း မကောင်းခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ကုမ္ဗဏီများစွာထောင်၍ ပါမစ်လေ ျှာက်ခြင်းနှင့် ပါမစ်ဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းခြင်း
သကြား Re-export ပါမစ်လေ ျှာက်ထားမှုတွေမှာ တစ်ဦးတည်း ကုမ္ဗဏီများစွာ ခွဲထောင်ပြီး ပါမစ်လေ ျှာက်တာမျိုး၊ စီးပွားရေးအုပ်စု တစ်ခုက ကုမ္ဗဏီခွဲတွေများစွာနဲ့ ပါမစ်လေ ျှာက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို ကုမ္ဗဏီနာမည်များစွာနဲ့ ပါမစ်လေ ျှာက်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ လျှောက်ထားကြတာမို့ ပါမစ်တွေ ရရှိသွားကြတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းက ၊ စီးပွားရေးအုပ်စု တစ်ခုတည်းက ပါမစ်များစွာကိုင်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ကလည်း ကြီးကြီးမားမားရှိနေခဲ့တာပါ။
အဲဒီတစ်ဦးတည်းက၊ စီးပွားရေးအုပ်စုတစ်ခုတည်းက ပါမစ်တွေကို ကိုင်ထားခဲ့ကြတဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေထဲမှာ အရင် ဝန်ကြီး ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲဟောင်း တွေရဲ့ကုမ္ဗဏီတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပါမစ်ဈေးကွက် ကြီးမားလာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာငွေလဲဈေးနှုန်းဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ကျော်အထိ တက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်လာဈေး ထပ်မံ မမြင့်တက်စေဖို့ ဒေါ်လာသုံးစွဲနေတဲ့ သွင်းကုန်စည်တင်သွင်းမှု လုပ်ငန်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေထွက်ပေါက် အရင်းအမြစ်တွေကို အစိုးရက ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ သကြား Re-export ပါမစ်ကိုလည်း အစိုးရဘက်က ပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ။ သို့သော်လည်း ယခင် လျှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ ပါမစ်တွေ ကုမ္ဗဏီတွေ လက်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ပါမစ်တစ်စောင်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သောင်းနဲ့ချီပေးဝယ်ရတဲ့အထိ ဈေးကောင်းလာပါတယ်။
သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်ဦးဇော်ဌေးက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော်ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ပြောဆိုရင် သကြား Re-export ပါမစ်ကိစ္စကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ဒေါ်လာငွေ စီးထွက်မှုကြောင့် ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်များပြီး ဒေါ်လာတန်ဖိုး ဆက်တက်လာမှုတွေ တားဆီးနိုင်ဖို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လစကလို့ သကြားအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကို တစ်ဆင့်ခံ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့် Re-export ပိတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ သကြား အပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်း Re-export ပါမစ်တွေ ဒေါ်လာသောင်းချီ ဈေးပေါက်နေတာကို သိရှိထားကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇော်ဌေးက အဲဒီကိစ္စကို သမ္မတရုံးနဲ့ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ပူးပေါင်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်အပြီး ၄ လအကြာမှာ ဦးရန်နိုင်ထွန်း ရာထူးတာဝန်ကနေ ဖယ်ရှားထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် Re-export ပါမစ်တွေ လျှောက်ထားမှုတွေမှာ ပါမစ်တွေ တစ်ဦးတည်းက ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္မဏီများစွာကို ထုတ်ပေးခဲ့မှုနဲ့ အဲဒီပါမစ်တွေပြင်ပမှာ ဈေးကွက်အကြီးအကျယ် ဖြစ်ထွန်းခဲ့မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်လို့ တာဝန်အရှိဆုံးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်း ကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ဘူးလို့ ကုန်သည်နဲ့ အရာရှိအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
AA စခန်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီး အလောင်းငါးလောင်းနှင့် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းမိဟု စစ်တပ် သတင်းထုတ်ပြန်
စစ်ကိုင်းတွင် ကျောက်မီးသွေးတွင်းပေါက်ကွဲမှု တရုတ် ၁ဦးနှင့် မြန်မာ ၄ ဦးသေဆုံး